Princess Hours - Thai Ver. ( 2017 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel May 04, 2017
တရုတ်သံတွေ ထိုင်ဝမ်သံတွေ ဂျပန်သံတွေ ကိုရီးယားသံ တွေကို ကြားနေမြင်နေ ကြည့်နေရမှာ ငြီးငွေ့လာမှာစိုးလို့ 2017 ခုနှစ်ထွက် အသစ်စက်စက် Thai Drama လေး တစ်ခုကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ် ...
မနေ့က Trailer video တုန်းက ပြောပြခဲ့တဲ့ အတိုင်း ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ရွှေမင်းသားလေးရဲ့ ချစ်ပုံပြင် ( Princess Hours ) ကို အခြေပြုပြီး Thai တွေမှ ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ...
25.04.2017 က စပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ True4U ရုပ်သံလိုင်း မှ ထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိပြီး ယနေ့နဲ့ဆို3ပိုင်း တိတိ ထုတ်လွှင့်ပြီးလျက်ရှိပါပြီ ...
Main Cast တွေ အနေနဲ့ကတော့ မင်းသား Phiangphor Sarasathapheng နှင့် မင်းသမီးချောလေး Ungsumalynn Sirapatsakmetha တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ - ဘူတင် နိုင်ငံက် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဘုရင်ကြီး သာဒါ မှာ သားတော်တစ်ပါးရှိတယ် ... သူကတော့ မင်းသားလေး အင် ပေါ့ ... ဘုရင်ကြီး နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ England နိုင်ငံမှာ ပညာပြန်သင်ကြားနေတဲ့ အင် ကို ပြန်ခေါ်ပြီး ... အရင် မင်းကြီး ထားခဲ့တဲ့ ကတိစကားတစ်ခုအရ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးနဲ့ လက်ဆပ်ပေးဖို့ ပြောပါတော့တယ် ... ထို အမျိုးသမီးငယ်လေးကတော့ အနုပညာ ဘာသာရပ်ကို လေ့လာဆည်းပူးနေပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး ရွှတ်ရွှတ်နောက်နောက် နေတတ်ပြီး အသက် ၁၉ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ ကျောင်းသူလေး ခနင် ပါ ...
ထိုအသက် ၁၉ နှစ်သာရှိသေးပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ ခနင် ဟာ ရုတ်တရက် လက်ထပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရသောအခါ ... ထိုအမျိုးသားမှာလဲ ဘူတင် နိုင်ငံရဲ့ မင်းသားလေး ဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရသောအခါ ... ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ ဆိုတာကိုတော့ Princess Hours ( Thai Ver. ) လေးကို ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော် ...
Romance , Comedy သီးသန့်မဟုတ်ပဲ တခြား ဘာတွေပါလာမလဲဆိုတာကိုတော့ ရင်ခုန်စွာ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြရအောင်နော် ...
Rating အရလဲ MyDramaList မှာ 7.6/10 ရရှိထားတဲ့ rating ကောင်း Drama လေး တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်နော် ...
Translator - Myat Shweyeai Khine | Anonymous X
File Size - 300+ MB
Episode 13 ( Opendload Link )
Labels: Drama Romance Thailand
Kyawt Kay Khine May 4, 2017 at 2:51 AM
Night Fury May 16, 2017 at 10:31 AM
Plzzz ep 6
Night Fury May 17, 2017 at 10:06 AM
May Thu May 17, 2017 at 9:36 PM
Naw Hel Muu Soe May 21, 2017 at 7:41 PM
Naw Hel Muu Soe May 21, 2017 at 7:42 PM
April 연인 May 22, 2017 at 9:46 PM
nnnn May 23, 2017 at 8:02 AM
May Thu May 24, 2017 at 1:59 AM
waiting for you :3 :3
Naw Hel Muu Soe May 24, 2017 at 6:37 PM
အပိုင်းသစ်တွေကဘယ်တော့တင်တာလဲ စောင့်ရတာသစ်ကုလားအုတ်ဖြစ်တော့မှာမို့လို့ပါ :-):-D
Night Fury May 24, 2017 at 7:31 PM
Plz ep 08.09
k May 27, 2017 at 11:06 PM
dd May 30, 2017 at 11:24 PM
10 & 11 လာသေးဘူးလား
Unknown May 31, 2017 at 2:27 AM
ei khine May 31, 2017 at 3:03 AM
May Thu June 3, 2017 at 12:09 PM
May Thu June 8, 2017 at 1:47 AM
Naw Hel Muu Soe June 16, 2017 at 2:02 AM
k June 16, 2017 at 10:00 AM
15 လာသေးဘူးလား :)
dd June 20, 2017 at 10:01 PM
ကျန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလဲ ဆက်ပါဦးနော် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ketty lum June 23, 2017 at 7:58 AM
May Thu June 28, 2017 at 8:01 PM
15 16 17 18 19 plzzzzzzzzzzzz
May Thu July 4, 2017 at 11:10 PM
new episode plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
May Thu July 6, 2017 at 2:09 AM
May Thu July 7, 2017 at 10:44 AM
May Thu July 8, 2017 at 1:00 AM
May Thu August 7, 2017 at 8:08 AM